Ezemidlalo Ukudla Ukulahlekelwa isisindo I-Monodiettes
Ukudla okusekelwe ekusebenziseni umkhiqizo owodwa kuphela kubizwa ngokuthi i-mono-diet. Uhlangothi oluhle kwalokhu kudla ukuthi isonto umuntu angalahlekelwa cishe ngamakhilogremu amane. Kodwa indlela yokugcina isisindo ngemuva kokudla okuyi-mono-yokudla inesithakazelo kwabanye abambalwa.
Kungcono kakhulu ukusebenzisa i-mono-yokudla
Ngokusho kwabantu abaningi, i-mono-yokudla ilungele amadoda, ngoba owesifazane angaba umlutha kuso. Ekugcineni, owesifazane akakwazi ukulahlekelwa isisindo, kodwa athole. Kudingeka ukwazi ukuthi lokhu kudla kusetshenziswa izinsuku ezingu-3-4, kungabi khona, ngaphandle kwalokho isisindo emva kokudla sizophumula ngokushesha futhi ngeke ubone umphumela. Odokotela bacebisa abahlengikazi basebenzisa lolu hlelo lokudla kanye ngenyanga, okungenani amabili, ukuze kugcinwe isisindo.
Yini okufanele uyenze ukuze ugcine umphumela uzuzwe ngemuva kokudla kwe-mono
Ukugcina i-mono-ukudla isisindo sakho kuzosizwa ngendlela ekwazi ukuphuma kuyo. Uma usuka ku-mono-yokudla, udinga ukusebenzisa umkhiqizo owawuyisisekelo sokudla kwakho. Isibonelo, uma usebenzisa i-buckwheat, bese uqhubeka ukuyisebenzisa, kodwa ngesikhathi esifanayo wengeze imikhiqizo engeke ikunike amakhilogremu engeziwe. Kungaba ngobuncane beet beti, iklabishi, inhlanzi, njll. Uma ufaka inhlanzi ekuseni, kanye nobhontshisi obuncane emini kusihlwa, ngaphezu kokunye okunye okunye, ngeke kuphazamise kuphela umphumela, kodwa kuzokwenza umzimba ube mnandi ngezinto ezisebenzise isikhathi ekusetshenzisweni komkhiqizo owodwa. Kubalulekile ekuphumeni kokudla ukuze ugcine isisindo, uphuze amanzi. Thatha umzimba usuku kumele ungabi ngaphansi kwama-1.5 amalitha ngosuku. Wonke umuntu ofuna ukulondoloza intsha uyazi ngalokhu. Amanzi athathelwa itiye eliwusizo eliwusizo, okusiza ukugcina isisindo emva kokudla, futhi kusiza ukuqeda umzimba wezinto ezihlukahlukene ezingadingekile.
Kanti futhi, ukuze ulondoloze isisindo ngemuva kwe-mono-yokudla, umuntu akumelwe akhohlwe ngezinhlobo ezahlukene zezithelo, kodwa ngobuningi abangeke bavele ngokushesha. Futhi ukudla kufanele kugcinwe, ngamanye amazwi, udinga ukudla kathathu ngosuku ngaphandle kokudla okungeziwe. Ungakhohlwa ngokuzikhandla ngokomzimba, ngoba ngosizo lwabo kulula ukugcina isisindo ngendlela evamile. Ukuzivocavoca umzimba - lokhu kuyingxenye yinkimbinkimbi yokugcina isisindo ngemuva kokudla. Kuhle kakhulu ukwenza imfanelo, ukudansa, ukuvivinya umzimba. Ngemuva kwalokho, noma ngabe udle okungaphezu kwalokho okushiwo, ngakho-ke uma wenza imishini yokudlala, uzosusa ama-calorie amaningi, njengoba lezi zigaba zivutha amafutha. Kuhle kakhulu ukuya echibini, thatha ishaja ehlukile. Ungakhohlwa ngokuhamba emoyeni omusha. Uma ulandela lezi zincomo, lokhu kuzosiza ukugcina umphumela uzuzwe ngemuva kokudla okukodwa.
Ukudla kwe-Soy: Imenyu yesonto
Ukudla okulondekayo: ukulahla ngokweqile amasonto amabili
Ukudla kumantongomane - okuhle noma kubi
Ukudla kwe-Macaroni noma indlela yokulahlekelwa isisindo ngosizo lwe-pasta
Imithetho yegolide eyokusiza empilweni
Isipho sonyaka omusha ngesignali yezinkanyezi
Isaladi lesifuba senkukhu nge-breadcrumbs
Ukuxhumana, noma awunayo i-ruble eyi-100, futhi unabangani abangu-100
Ikhekhe "i-Anthill". Classic kanye nezinye zokupheka zemihle emihle ubudala
Ukwakhiwa kanye nenani lomsoco wezinhlanzi nemikhiqizo yezinhlanzi
Isaladi esisha yemifino ngamatamatisi omisiwe
Izinwele ezinamafutha - ukunakekelwa okukhethekile
I-English pie nama-nati ne-caramel